“हामी बसेको थलोमा निकुञ्‍ज आएको हो, निकुञ्‍ज भएको ठाउँमा हामी गएको होइन ।” एकातिर सरकारी नीतिको प्रहार, अर्कोतिर वन्यजन्तुको आक्रमण । दुवैको मारबाट पिल्सिएका छन्, यहाँका आदिवासी ।
वन्यजन्‍तुबाट जोगिन निकुञ्‍जमा गस्ती । यम बम
हामी देशका निकुञ्‍ज घुम्छौँ, रमाउँछाैँ । वनजंगल घुम्छौँ । डुंगा सयर गर्छौं । हात्ती चढ्छौँ । सफारी गर्छौं । तर हामीमध्ये कसैले त्यही निकुञ्‍ज लाई आश्रय बनाएर जीवन निर्वाह गरिरहेका रैथानेबारे कहिल्यै सोचेका छाैँ ? जस्तो, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्‍ज नै पुगौँ न । सिकार खेल्न आएका राजा वीरेन्द्रलाई यहाँका आदिवासी थारु समुदायले डुंंगा सयर गराउँथे, कुनै बेला । थारु समुदायलाई राजाले एक पटक तिमीहरुलाई अरु जग्गा चाहिन्छ भनेर सोधेछन् । उनीहरुले भनेछन्, ‘सरकार ! जग्गा होइन, वनजंगल र खोलानाला भए पुग्छ ।’ राजाले हुकुम प्रमांगी गरेर उनीहरुको चाहना पूरा गरे । यो ०२९ सालको कुरो थियो ।
तर त्यसको एक वर्षपछि विदेशी दातृसंस्थाको दबाबमा आफैँले दिएको वनजंगल र खोलानालाको उपभोग गर्न नपाउने गरी वीरेन्द्रले उनीहरुबाट खोसे । त्यहाँ निकुञ्‍ज बन्यो । रैथाने समुदायका कष्टका दिन त्यहीँबाट सुरु भए । झन्डै ९ सय ६४ वर्गकिमि क्षेत्र रैथानेबाट खोसियो । चितवन, मकवानपुर, पर्सा र नवलपरासीका केही भूभागमा पर्ने यो ठाउँलाई निकुञ्‍ज घोषणा गरिएपछि पुस्तौँपुस्तादेखि चुरे क्षेत्रदेखि नारायणी, रिउ र राप्ती नदी बसोबास गरिरहेका थारु समुदायलाई त्यहाँबाट अलग गरियो ।
३ कात्तिक ०७६ मा नेपालमा प्रकाशित आवरण कथामा सहकर्मी यम बमले चितवन पुगेर गरेको स्थलगत रिपोर्टको सार थियो, बस्ती जोगाउने कि वन्यजन्तु ? अर्थात्, जीवजन्तुले बालीनाली सखाप पारेकै छन् । स्थानीय वन्यजन्तु आक्रमणको त्रास खेपेका छन् । अंगभंग भएका छन् । मृत्यु भोगेका छन् ।
सौराहाको एक होटलमा वेटर रहेका स्थानीय कुशवेन्द्र चौधरीले केही समयअघि मलाई भनेको अझै सम्झिन्छु । उनले भनेका थिए, “हामी बसेको थलोमा निकुञ्ज आएको हो, निकुञ्‍ज भएको ठाउँमा हामी गएको होइन ।” एकातिर सरकारी नीतिको प्रहार, अर्कोतिर वन्यजन्तुको आक्रमण । दुवैको मारबाट पिल्सिएका छन्, यहाँका आदिवासी ।
कसका लागि निकुञ्‍ज
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्‍जका रैथाने समुदायको जीवनशैली वनजंगल र खोलानालामा निर्भर छ । उनीहरुका लागि कन्दमूलदेखि माछामासु अनि दाउरापातको स्रोत नै यही हो । तर जब उनीहरुको बस्तीमा निकुञ्ज पुग्यो, जीवनशैली क्षतविक्षत भयो । पश्‍चिमाले सिकाएअनुसार बनाइएको निकुञ्‍जमा सेनाको आवश्यकता भयो तर पुस्तौँदेखि बस्दै आएको समुदायको रत्तिभर पनि आवश्यकता बोध गरेन, निकुञ्‍जले ।
आफ्नै भूगोलमा यो समुदायलाई राज्य र दातृ निकाय लागेर सीमान्तकृत बनाइयो । के रैथाने समुदायको जीवनस्तर उकास्‍न निकुञ्‍ज बनाएको हो ? होइन, जैविक विविधता जोगाउने भनिए पनि राजपरिवार, पैसावाल र पावरदार विदेशीलाई सिकार खेल्न बनाइयो, निकुञ्‍ज । निकुञ्‍ज निर्माणका सकारात्मक पाटा पनि छन् तर रैथाने समुदायलाई साथमा लिएर चलाउँदा बढी प्रभावकारी हुन्थ्यो । रैथानेको जीवनशैलीमाथि हमला गर्नु पर्दैनथ्यो । तर सत्ताको घैँटोमा घाम नलागेपछि के नै गर्न सकिन्छ र !
लामो समयदेखि प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनको अध्ययन, अनुसन्धान र वकालतमा संलग्न सोमत घिमिरेले लेखेको जुर्मुराएको बखतमा निकुञ्‍जसँगै बस्ती छिरेको सेनाले रैथानेहरुको जीवन कसरी दुरुह बनाएको छ भन्ने केही घटना उल्लेख गरेका छन् । बस्ती–बस्ती डुलेर अनि रैथानेसँग भेटेर उनले तयार पारेको यो पुस्तक पढ्दा थाहा हुन्छ, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्‍जमा सेनाले रैथानेमाथि गर्दै आएको अत्याचार । यो भूगोलमा माछा मारेर जीवन गुजारा गर्ने माझी जाति पनि छन् । सेनाले उनीहरुलाई माछा मार्न दिन्छ तर मारेको माछामाथि भने उसको हक चल्छ । घिमिरे लेख्छन्, ‘स्थानीयलाई माछा मार्न नदिनेभन्दा पनि माछा खोस्‍न बसेको छ, सेना ।’ त्यसरी खोसिएको माछा सेनाको अफिसर मेसमा जर्साबको खान्की बन्‍न पुग्छ । माछा मारेर फर्किएकी युवतीको हातबाट माछा खोसेर सजायस्वरुप नांगै नचाएका नमीठा पल पनि थुप्रै छन् ।
घरेलु प्रयोजनका लागि वनमा घाँसपात, दाउरा लिएर फर्कंदा सेनाको बुट बजारिनु यहाँका लागि नयाँ घटना होइन । बिरामी हुँदा वनबाट जडीबुटी ल्याएकै कारण तस्करको नाममा थुनामा जाकिएका छन्, रैथाने । हजुर ! वनजंगल र नदीनालामा रैथानेलाई प्रवेश निषेध छ । यो भूमिसँग जीवनको साइनो जोडिएको छ, भूमि सन्तानहरुको । तर यस्तो साइनो तोड्न सरकारले जंगलमा सेनाको परेड खेलाएको छ ।
यत्तिमै सेनाले दिने सास्ती सकिँदैन । सेनाका जवान रैथानेका घर–घर डुल्छन् । युवतीसँग मायाप्रेम गर्छन् । युवती गर्भवती हुन्छन् । सन्तान जन्मिन्छन् । त्यतिबेला सेनाका यस्ता जवानको कतै सरुवा भइसक्छ अनि पिताविहीन सन्तान जन्मिन्छन् । युवती र बच्चा अलपत्र पर्छन् । बाबुको पहिचान नपाएका यस्ता सन्तान समाजका लागि समस्या हुन्छन् । यसबारे सैनिक मुख्यालयलाई थाहा नभएको होइन । तर किन–किन यस्ता घटना अहिले पनि घटेका छन्, चितवनका जंगलमा ।